आन व्है सँस्कृतिसम्बन्धी विशेषतायुक्त स्थल अर्थात् ची सीबारे चर्चा - China Radio International
आन व्है सँस्कृतिसम्बन्धी विशेषतायुक्त स्थल अर्थात् ची सीबारे चर्चा
(GMT+08:00) 2013-06-19 15:39:57
आदरणीय श्रोता, आजको "चिनियाँ विशेषताप्रति माया"शीर्षकमा प्रतिभा प्रतिस्पर्धामा म सञ्चालिका मेघाको नमस्कार। बितेका चार दिनयता तपाईंले त्यस प्रतिभा प्रतिस्पर्धाका अन्य चार भाग सुन्नुभएको होला। आजको यस विषय "चिनियाँ विशेषताप्रति माया"शीर्षकमा प्रतिभा प्रतिस्पर्धाको पाँचौं भाग हो। आज पनि म नियमित रुपमा तपाईंसमक्ष दुईवटा प्रश्न उठाउँछु। साथै प्रत्येक प्रश्नका लागि मैले दुईवटा जवाफ पनि तयार गरें। एउटा ठीक र एउटा बेठीक छ। तपाईंले दुईवटामध्येको सही उत्तरलाई छानेर इ-मेल वा वेभसाइटमार्फत हामीलाई पठाउनुहुन्छ। अब ती दुईवटा प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहोला!
एक. हु थरको पुर्ख्यौली मन्दिरको कूल क्षेत्रफल कति छ?
दुई. लोङ्ग छ्वान गाउँका प्राय:जसो बासिन्दाहरूको थर कुन हो?
श्रोता, भर्खरै मैले आजका दुईवटा प्रश्न प्रस्तुत गरें। तपाईंले आजको कार्यक्रम सुनेपछि छिटोभन्दा छिटोगरी इ-मेल वा वेभसाइटमार्फत हामीलाई सही उत्तर पठाउनुहोस्। तपाईंले यस पटकको प्रतिभा प्रतिस्पर्धामा राम्रो उपाधि प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो हार्दिक शुभकामना छ। ल, अब उक्त दुईवटा प्रश्न लिएर हामीसँगसँगै चीनको आन व्है प्रान्त गएर स्थानीय साँस्कृतिक विशेषता बोकेको रमणीय स्थल अर्थात् ची सीको अवलोकन गरौं है त!
ची सी जिल्ला चीनको आन व्है प्रान्तको दक्षिणी भागमा पर्दछ। प्राचीनकालमा आन व्हैमा जम्मा छवटा जिल्ला थिए। ची सी जिल्ला तीमध्येको एक पनि हो। त्यस जिल्लालाई व्है चौ सँस्कृतिको उद्गम स्थल पनि मानिएको छ। अब म व्है चौ सँस्कृतिबारे श्रोतालाई केही चर्चा गर्दैछु। व्है चौ सँस्कृति चीनका तीनवटा ठूलो क्षेत्रीय सँस्कृतिमध्येको एक हो। व्है चौ सँस्कृतिको परिधि निकै फराकिलो छ। त्यसमा अर्थतन्त्र, समाज, शिक्षा, साहित्य, कला, हस्तकला, वास्तु-शैली र चिकित्सा आदि विषयहरू समावेश छन्। भौगोलिक स्थितिको दृष्टिबाट हेर्दा ची सी भन्ने स्थल व्है चौ सँस्कृतिको केन्द्रीय स्थल हो। त्यसैगरी व्है चौ सँस्कृतिमा "ची सी तत्व"भरिपूर्ण देखिन्छ।
ची सीबारे चर्चा गर्दै लोङ्ग छ्वान गाउँ भन्ने कुरालाई उठाउनुपर्छ। लोङ्ग छ्वान गाउँ ची सी जिल्लामा अवस्थित एउटा प्राचीन गाउँ नै हो। प्राचीन तुङ्ग चिन वंशमा त्यस गाउँको निर्माण गरिएको थियो। हालसम्म त्यस गाउँको इतिहास एक हजार छ सय वर्षभन्दा लामो भइसकेको छ। स्थानीय पथ प्रदर्शकले यसरी भन्छिन्:
हाल लोङ्ग छ्वान गाउँमा चार सयभन्दा बढी परिवारका एक हजार तीन सयभन्दा बढी बासिन्दाहरू बसोबास गरिरहेका छन्। ती बासिन्दाहरूमध्ये प्राय:जसो अर्थात् नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू हु भन्ने थरका नाम हुन्। ती चार सयभन्दा बढी परिवारमध्ये करिब एक परिवारका सदस्यहरू मात्र तिङ्ग भन्ने थरका नाम हुन्।
इतिहासबाट लोङ्ग छ्वान गाउँमा छाडिएका प्राचीन पूरातात्त्विक वस्तु निकै बढी छ। हालसम्म पूर्ण रुपमा सँरक्षित गरिएको प्राचीन पूरातात्त्विक वस्तुको सङख्या तीन सयभन्दा बढी छ। तीमध्ये "राष्ट्रिय धन"भनिने हु थरको पुर्ख्यौली मन्दिरलाई प्रतिनिधित्व मानिएको छ। त्यस पुर्ख्यौली मन्दिरको निर्माण प्राचीन सोङ्ग वंशमा गरिएको थियो।
श्रोतालाई थाहा छ होला, पुर्ख्यौली मन्दिर प्राचीन व्है चौमा एउटै थरको परिवारका मानिसहरूले भेला भई पुर्खाको सम्झना र पूजा-आजा गर्ने पवित्र ठाउँ थियो। हु थरको पुर्ख्यौली मन्दिरको मुख्य बाह्य वास्तु-शैली प्राचीन मिङ्ग वंशको थियो भने भित्री सिँगार प्राचीन छिङ्ग वंशको शैली थियो। त्यस पुर्ख्यौली मन्दिरको कूल क्षेत्रफल एक हजार पाँच सय चौंसठी वर्गमिटर रहेको छ। त्यसमा विभिन्न किसिमका कुशल काठे मूर्तिहरू ज्यादै आकर्षित देखिन्छ। त्यसै कारण हु थरको पुर्ख्यौली मन्दिरलाई "व्है चौ काठे मूर्ति कलाको मूल्यवान भण्डार"पनि भनिन्छ। साथै त्यसलाई चीनका प्राचीन पुर्ख्यौली मन्दिरहरूमध्येको एक विशेषता पनि मानिएको छ। साथै त्यस हु थरको विशेष पुर्ख्यौली मन्दिरलाई चिनियाँ काठे कलाको एक उज्ज्यालो मोती पनि भनिन्छ।
हु थरको पुर्ख्यौली मन्दिरमा कुँदिएका काठे मूर्तिहरू ज्यादै सुन्दर र आकर्षित देखिन्छ। त्यसबारे चर्चा गर्दै स्थानीय पथ प्रदर्शकले यसरी भन्छिन्:
यहाँका काठे मूर्तिमा मुख्यगरी कमल रहेका हुन्। यो काठे चित्र हेर्नुस्, त्यसमा सुन्दर कमल र गँगटा कुँदिएको छ। त्यसको अर्थ के हो र? हाम्रो चिनियाँ भाषामा कमलको उचारण "ह"भनेको छ भने गँगटाको उचारण "से"भन्ने हो। ती दुवै उचारण जोडिएपछि "ह से"भन्ने हो। त्यसको सुमधुर अर्थ "मेलमिलाप"भन्ने रहेको हो।
वास्तवमा हु थरका पुर्ख्यौली मन्दिरमा सँरक्षित काठे मूर्ति तथा काठे चित्रहरूमा सुमधुर जीवन, मेलमिलापयुक्त समाज, शान्त परिवारसम्बन्धी मानिसहरूको प्रार्थना र शुभेच्छा पनि समावेश छन्। श्रोता, समय मिलेको खण्डमा तपाईं पनि ची सी पुगेर त्यहाँको विशेषतायुक्त हु थरको पुर्ख्यौली मन्दिरको अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीय गहिरो साँस्कृतिक वातावरणको पनि अनुभव गर्नसक्नुहोला।
आदरणीय श्रोता, भर्खरै मैले "चिनियाँ विशेषताप्रति माया"शीर्षकमा प्रतिभा प्रतिस्पर्धाको पाँचौं भाग सुनाएकी छु। अब आजका दुई प्रश्न पुन: एक पटक प्रस्तुत गर्दैछु।
तपाईंले आजको कार्यक्रम सुनेपछि ठीक उत्तर छानेर इ-मेल वा वेभसाइटमार्फत हामीलाई तुरुन्तै पठाउनुहुने प्रतिक्षामा रहिरहेका छौं। ल, आजको यस विषयलाई यत्ति नै, कार्यक्रमबाट मेघालाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।